६ वर्ष को अवधिमा नेपालमा महिला यौनकर्मीको संख्या दोब्बरले वृद्धि – दैलो न्युज । न्याय र समानताको संवाहक
फाल्गुन ६, २०७३ ०६:५७ मा प्रकाशित
इसरोकार संवाददाता फागुन ६ काठमाडौं , नेपालमा महिला यौनकर्मीको संख्या विगत ६ वर्षको अन्तरालमा दोब्बरले वृद्धि भएको सरकारी अध्ययनले देखाएको छ । गत भदौदेखि मंसिरसम्म तीन महिनाको अवधिमा राष्ट्रिय एड्स तथा यौनरोग नियन्त्रण केन्द्र र विभिन्न दातृ निकायहरूले संयुक्त रूपमा गरेको अध्ययनले सन् २०१० को अनुपातमा नेपालमा महिला यौनकर्मीको संख्यामा दोब्बरले वृद्धि भएको देखाएको हो । बिहीबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा दिइएको जानकारीअनुसार महिला यौनकर्मीहरूको संख्या ५४ हजार एक सय ९७ जना रहेको छ । यो सन् २०१० को अनुपातमा २७ हजार एक सय ९७ जनाले बढी हो ।
तर, विभिन्न संघ–संस्थाले सरकारको यस्तो तथ्यांकलाई आधिकारिक मान्न नसकिने बताएका छन् । लामो समयदेखि एचआइभी-एड्स तथा यौनरोगसँग सम्बन्धित ती संस्थाहरूले सरकारले गलत तथ्यांक प्रस्तुत गरेको आरोप लगाए । लागुऔषध प्रयोगकर्ता तथा संघ–संस्थाहरूको महासंघका अध्यक्ष विष्णु फुयाँल शर्माले सरकारले कोठाभित्र बसेर अध्ययन गरेको दाबी गरे ।
‘सरकारले यस्तो अपूरो तथ्यांक दिनु भनेको लाजमर्दो विषय हो । केही तथ्यांकको अवस्था हेर्दा वास्तविकताको नजिक पुगेजस्तो देखिए पनि समग्रमा हेर्दा कोठाभित्र बसेर बनाएजस्तो छ । यसले यौनकर्मीहरूको अवस्थामा ठूलो दरार ल्याउनेछ,’ उनले भने । शर्माले अन्तिम अवस्थामा दातालाई लोभ्याउन तयारी विनातथ्यांक सार्वजनिक गरेको पनि बताए । दातृ निकायले आर्थिक कार्यक्रम पठाउने समय नजिकिएसँगै हतार हतारमा अध्ययन गरेकाले गलत तथ्यांक आएको सहभागी संघ–संस्थाका प्रतिनिधिको भनाइ छ ।
सरकारले सार्वजनिक गरेको सन् २०१६ को तथ्यांकमा महिला यौनकर्मीको संख्या न्यूनतम ४३ हजार आठ सय २९ देखि अधिकतम ५४ हजार एक सय ९७ रहेको छ । सन् २०१० मा सरकारले नै सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा महिला यौनकर्मीहरूको संख्या २७ हजार थियो । तेस्रोलिंगी, पुरुष यौनकर्मी, समलिंगी पुरुष र पुरुषसँग यौन कार्यमा संलग्न हुने अन्य पुरुषहरूको संख्या जम्मा एक लाख ११ हजार आठ सय ५२ जना रहेको देखिएको छ । ‘सुईद्वारा लागुपदार्थ लिने व्यक्तिहरूको अनुमानित संख्या ३४ हजार ३ सय ७५ रहेको तथ्यांकले देखाएको छ ।
सन् २०१० मा लागुपदार्थ लिने व्यक्तिहरूको संख्या ५४ हजार थियो,’ शर्माले भने । उनले सार्वजनिक सरकारी तथ्यांक कुनै कोणबाट सत्यतथ्य नभएको बताए । हाल एड्स रोगी उपचारमा कति छन् भनेर सरकारले कुनै तथ्यांक दिन नसक्नु ठूलो कमजोरी भएको स्पष्ट पारे । सरकारले ४४ जिल्लाको अध्ययन गरी तथ्यांक सार्वजनिक गरेको हो । बाँकी ३१ जिल्लाको अवस्थाबारे प्रक्षेपणका आधारमा संख्या राखिएको छ ।
कमजोरी भयो : पौडेल
६ वर्षको अवधिमा महिला यौनकर्मीको संख्यामा दोब्बरले वृद्धि हुनु आश्चर्यको विषय भएको राष्ट्रिय एड्स तथा यौनरोग नियन्त्रण केन्द्रका निर्देशक डा. तरुण पौडेलले बताए । तथ्यांकमा धेरै भिन्नता आएकाले पुनः अध्ययन गरिने उनले जानकारी दिए । ‘हामी यसलाई थप छलफल र अध्ययन गर्नेछौँ,’ पौडेलले भने, ‘यो तथ्यांकमा केही कमी देखिएको छ, यसलाई सुधार गर्नेछौँ ।’ यौनकर्मीहरूको संख्या वृद्धि हुँदै जाँदा एचआइभी-एड्स लाग्ने सम्भावना पनि त्यतिकै हुने उनको भनाइ छ ।
गलत तथ्यांक आएको भनेर सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरूले कार्यक्रममा आवाज उठाएपछि पौडेलले केही तथ्यांक तलमाथि परेको र केही अध्ययनमै कमजोरी भएको स्वीकार गरे । स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा. राजेन्द्र पन्तले अध्ययनबाट आएको तथ्यांकको आधारमा नयाँ कार्यक्रम बनाउने बताए ।
नया पत्रिका बाट साभार